सुन्तलाले ल्यायो किसानमा खुसी – www.janabato.com
सुन्तलाले ल्यायो किसानमा खुसी
२६ पुष २०७५, बिहीबार ०३:३१ January 10, 2019 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
रामेछापको शैलुङ पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा परिचित पुँडीमा यसवर्ष सुन्तला खेती फस्टाएको छ । मौसमले साथ दिएपछि दाना पनि राम्रै फलेको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष उत्पादन मात्रा र असल दाना फलेको यहाँका किसानहरु बताउँछन् । हाल दोरम्बा गाउँपालिका–७ मा पर्ने पुँडीलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट फल दिने र लामो समयसम्म बोट टिक्ने क्षेत्रको रुपमा परिचित छ ।
यसै हप्ताबाट मात्र यस क्षेत्रका सुन्तला देशका विभिन्न बजारमा पुर्याइन थालिएको छ । यहाँको मुख्य बजार काठमाडौंको कालिमाटी र कुलेश्वर फलफूल बजार हो । तनहुँ, स्याङजा, गोरखा, गुल्मी, कास्की, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुलीका सुन्तला टिपेर सकिँदै जाँदा बल्ल पुँडीको सुन्तला बजारमा आउन शुरु हुन्छ । माइनस १ डिग्रीसम्म तापक्रम झर्ने यस क्षेत्र काभ्रेको कोशीपारीबाट शैलुङ जाने बाटोमा पर्दछ । सानो शैलुङ महादेवको नाममले चिनने पुँडीदेखि करिब ४ किलोमिटर माथि जंगलबीचमा महादेव मन्दिर छ । जहाँ हरेक पौष पूर्णिमामा मेला लाग्छ । मेलामा चितवन, मकवानपुर, बारा, सिन्धुली, काभ्रे। सिन्धु्पाल्चोक, दोलखा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङदेखिका आन्तरिक पर्यटक र श्रद्धालुहरुको भीड लाग्छन् ।
हरेक पुस पूर्णिमामा तीन दिनसम्म लाग्ने शैलुङ मेलामा जानेहरु पर्यटक तथा भक्तजनले किसानका घरबारीबाटै सुन्तला किनेर ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । किसानै हातबाट सुन्तला किन्न पाउँदा भक्तजनहरु खुसी व्यक्त गर्दछन् । यहाँ पुगेर किन्ने ग्राहकले सुन्तलालाई प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नै पर्दैन ।
‘बजार भाऊ चाहिं के कस्तो मिल्छ ? तर यस वर्ष सुन्तला राम्रै फलेको छ’ पुँडीका किसान नरबहादुर तामाङ भन्छन् । सुन्तला दाना पनि राम्रो भएको र धेरै मात्रामा फलेको उनले बताए । गत वर्ष राम्रोसँग नफलेको उनको अनुभव छ । उनी आज पनि सुन्तला टिप्ने र भर्ने कामै व्यवस्त रहेको मिर्मिरे अनलाइनलाई बताए ।
दुई वर्षअघि एकै घरले ५ लाख रुपैयाँसम्म सुन्तलाको आम्दानी गरेको र यसवर्ष त्योभन्दा बढी हुने उनले बताए । यो क्षेत्र साविकको लखनपुर गाविसको वडा नम्बर ९ मा पथ्र्यो । दोरम्बाको वडा नम्बर ४ र ७ सुन्तला उत्पादनको लागि उत्कृष्ट क्षेत्र मानिन्छ । तैपनि राज्यको नजरमा पर्न सकेको छैन । यस क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने माग किसानहरुले गरेको धेरै भइसकेको र सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय लालध्वज लामाले गुनासो गरे । पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर सुन्तला उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत उनले गरेका छन् ।
यतिखेर पुँडी र साविकको गौश्वरा गाविस–१ टेक्सिङ क्षेत्रमा सुन्तला टिप्ने र बजारीकरण गर्ने कामले किसानलाई फुर्सद छैन । दाेरम्बाकाे वडा न‌. ७ को खापु, थापागाउँ, डोप्ला डाँडागाउँलगायत क्षेत्रमा पनि सुन्तला टिप्नेको लहरै चलेको छ । भर्रयांगकाे सहयताले सुन्तला टिप्ने गरिएकाे छ । टेक्सिङमा पनि यो वर्ष सुन्तला उत्पादन राम्रो भएको किसान पेमसिं तामाङले बताए । तर बाँदरले खाने र झार्ने समस्याबाट किसान हैरान भनेको उनले बताए ।
जुनार, कागती खेतीको लागि पनि यस क्षेत्र राम्रो मानिन्छ । तर किराबाट लाग्ने रोगका कारण जुनार खेतीबाट किसानले करिब हात झिकिसकेका छन् । बालीराेगकाे उपचार समयमा गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् कृषकहरुले । रोगका कारण यो वर्षबाट सुन्तलामा पनि छिटफुट देखिन थालेपछि यहाँका किसानहरु चिन्तित् छन् । यससँगै किसानकाे खुसी राेगले खाेस्ने हुन् कि भन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
← मोटरसाइकल दुर्घटना एकको मृत्यु
१० बुँदे माग सहित किसान महासंघ क्रान्तिकारी अर्घाखाँचीले बुझायो ज्ञापन पत्र →
नवलपरासीमा जल्यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको पुत्ला
१ पुष २०७४, शनिबार ०५:२९ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on नवलपरासीमा जल्यो अमेरिकी राष्ट्रपतिको पुत्ला
वार्षिक स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न
२६ फाल्गुन २०७४, शनिबार ०४:३३ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on वार्षिक स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न